Etu esi eme akara ukwu ma ọ bụ nha anya na keyboard | Nzukọ mkpanaka
Otu esi eme akara ukwu ma ọ bụ nha anya ≥ na ahụigodo
Aaron Rivas | | Nkuzi, Windows
Ọ bụrụ na ị na -edekarị, na -ede ma ọ bụ na -edebanye aha ugboro ugboro na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ, ọ ga -ekwe omume na ihe karịrị otu oge ị zutere otu na puku obi abụọ gbasara otu esi etinye mkpụrụedemede ma ọ bụ akara dị iche iche. Nke a na -abụkarị "nkwụsị" mgbe ịnweghị ike ịchọta otu esi etinye ha na ederede ịchọrọ, anyị makwa ya. Ma ọ bụ ya otu n'ime akara na akara na -ebute ọgba aghara kachasị bụ nke ka ukwuu ma ọ bụ nha, nke a bụ «≥».
N'ime ohere ọhụrụ a anyị na -akọwa ka esi eme akara a, nke a na -ejikarị n'ụdị na usoro mgbakọ na mwepụ. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ, onye nkuzi na ọrụ / nraranye gị - ihe ọ bụla ọ nwere ike bụrụ - chọrọ ya, edepụtara edemede a maka gị. Ọ ga -abakwara onye ọ bụla chọrọ ịgbakwunye akara a ebe ọ bụla, ọbụlagodi na ọ dị na nkata dị mfe ma ọ bụ na netwọkụ mmekọrịta.
1 Yabụ ị nwere ike ịme akara ka ukwuu ma ọ bụ nha na ahụigodo
1.1 Otu esi eme akara nke ukwuu ma ọ bụ nha ≥ na erughị ma ọ bụ nha ≤ na ahụigodo
1.2 Ụzọ ndị ọzọ iji mee akara nke karịrị ≥ ma ọ bụ ihe na -erughị ≤
Yabụ ị nwere ike ịme akara ka ukwuu ma ọ bụ nha na ahụigodo
Nke mbụ, ị ga -eburu n'uche wee mara ihe akara nke akara nhata ka ukwuu pụtara ma ọ bụ ọrụ na -emeju akara nke nha nhata.
N'ajụjụ, a na -eji akara ma ọ bụ akara a na -egosi n'ogo ntụnyere na ọnụọgụ dị n'aka ekpe karịrị ma ọ bụ ha nhata nke dị n'aka nri nke akara ahụ. Ọmụmaatụ: 5≥3; 6-5 ...
Ime ya na ahụigodo dị mfe ọ naghị ewe ihe karịrị otu sekọnd ma ọ bụ abụọ. N'iji ogwe aka nri nke nọmba na ahụigodo ọ bụghị ogwe ọnụọgụ dị n'elu, pịa nchikota igodo ndị a: Alt +242. Dị mfe dị ka nke ahụ.
N'ụzọ dị otu a, ị ga -enwe ike ịme, dee ma dee akara ka ukwuu ma ọ bụ nha anya na akwụkwọ Okwu ọ bụla, ihe mmịfe, akwụkwọ ndetu, na nchọta ihe nchọgharị, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ebe ọ bụla ị nwere ike iche, ha niile na -enweghị. ị ga -eji nnomi na mado a ma ama nke na -echekwa anyị ihe karịrị otu oge mgbe anyị na -amaghị ka anyị ga -esi jiri ahụigodo tinye otu agwa.
Otu esi eme akara nke ukwuu ma ọ bụ nha ≥ na erughị ma ọ bụ nha ≤ na ahụigodo
Ọ bụrụ na ịchọrọ ma jikwaa mara ka esi eme akara ka ukwuu ma ọ bụ nha nhata ≥, ọ dịkwa mma ịmara ka esi eme akara obere ma ọ bụ nha ≤ na ahụigodo. Ma ọ bụ ka ịme akara a ma ọ bụ agwa a, ị ga -eme otu ihe ahụ na nke ka ukwuu ma ọ bụ nha.
Naanị ị ga -pịa bọtịnụ Alt na, mgbe ị na -pịa ya, pịa nọmba 243 jiri akara ọnụọgụ ọnụọgụ nke ahụigodo ọ bụghị na ogwe dị n'elu. N'ụzọ dị otu a, ị nwekwara ike itinye akara nke ihe na -erughị ihe ọ bụla. O nwere ike ịmasị gị: Otu esi eme ndepụta ọtụtụ ọkwa na Okwu n'ụzọ dị mfe.
Ụzọ ndị ọzọ iji mee akara nke karịrị ≥ ma ọ bụ ihe na -erughị ≤
Ọ bụrụ na ị ga -eme ọtụtụ akwụkwọ Okwu wee rụọ ọrụ na nchịkọta akụkọ ahụ, ụzọ ọzọ ị ga -esi mee ha site na keyboard bụ ngalaba akara nke mmemme ahụ. Ma ọ bụ na, n'agbanyeghị na ụzọ kachasị mfe iji mee akara nke karịrị ma ọ bụ ihe na -erughị bụ site na njikọta igodo nke anyị kọwarala, enwere ike iji usoro a na Okwu, ọ dịkwa ka ndị a:
Ihe mbụ ị ga-eme bụ emeghe Okwu.
Mgbe ahụ, ozugbo anyị nọ na nchịkọta akụkọ, anyị ga -aga na ngalaba nke Fanye. Iji mee nke a, ị ga -aga n'akụkụ elu nke mmemme mmemme, na nhọrọ nhọrọ, ngwaọrụ na ihe ndị ọzọ, wee pịa Insert, dị ka egosiri na nseta ihuenyo na -esonụ.
Mgbe ahụ, n'akụkụ aka ekpe nke ngalaba ahụ, enwere ngalaba nke Ihe ngosi. Pịa ebe ahụ, mgbe ahụ a ga -egosipụta obere windo nwere ọtụtụ akara ngosi ndị dịbu na mbụ. N'ozuzu, a na -ahụ ndị nke karịrị ≥ na ihe na -erughị there n'ebe ahụ. Ọ bụrụ na ha abụghị, ị ga -pịa Ihe ngosi ndi ozo o Akara ndị ọzọ, wee chọọ ha n'etiti ọtụtụ akara, mkpụrụedemede na akara. Ozugbo achọtara, ị ga -pịa ha ka ọ pụta na akwụkwọ a.
Iji mechaa, enwerekwa ụzọ ọzọ, mana nke a bụ nke kacha baa uru, ee, ọ dịkwa, ka anyị na -ele anya n'elu, idetuo na mado. Nke a metụtara akara ma ọ bụ agwa ọ bụla ọzọ ị maghị ka esi eme ahụigodo.
Site na nke a ị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, Google “otu esi etinye ma ọ bụ mee akara nke ihe ka ukwuu ma ọ bụ ihe na -erughị ihe” ma ọ bụ, ọ bụrụ na -amasị gị, naanị “akara, akara ma ọ bụ agwa nke karịrị ma ọ bụ ihe na -erughị”. Mgbe ahụ, na nsonaazụ ọchụchọ, akara ndị ịchọrọ ga -apụta na, iji nweta ọrụ ahụ, ị ​​ga -e copyomi na mado ha ebe ịchọrọ ma ọ bụ chọọ ha. Agbanyeghị, ebe ọ bụ na ọ kacha pere mpe ma nwee ntụsara ahụ, ọ ka mma ịmụta ka esi eji ahụigodo eme ha; n'ụzọ dị otu a, a ga -ezere mkpa inwe njikọ Ịntanetị iji mee ọchụchọ, dịka ọmụmaatụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nkuzi » Otu esi eme akara ukwu ma ọ bụ nha anya ≥ na ahụigodo
Njehie 5000 Twitch: kedu ihe ọ pụtara na gịnị ka ị ga -eme?
Ihe nchọgharị Avast Secure bidoro n'onwe ya: Otu esi ezere ma ọ bụ wepu ya